Ny Tompon'andraikitra Supplier Partner
PTFE MANOHITRA-harafesiny ANDIAN-DAHATSORATRA
HDPE sodina SY Fittings
API 5L PSL1 & PLS2 sodina ANDIAN-DAHATSORATRA
OTHER ACCESSORIES NY fantsona
Butt-WELDING sodina Fittings
Vy sandoka sodina Fittings
Steel sodina nonon'ny & faladiany
API 5L LINE sodina CASE
Nilahatra PTFE sodina raharaha
FRP wrinding sodina raharaha
HDPE fantsona dradging raharaha
Fittings sodina raharaha
API 5L PSL1 sy PSL2 samy hafa ny Steel-dalana, Sodina
API 5L tsipika sodina (miray volo sy welded sodina) rehetra manana PSL1 naoty sy PSL2 vokatra roa fepetra arahana, dia tsy mitovy amin'ny zavatra simika, rafitra orinasa mpamokatra entana, milina hery, hafanana fitsaboana, fitsapana firaketana an-tsoratra, traceability etc.
-Dalana, fantsona ao amin'ny API 5L PSL2 dia ambony noho PSL1
PSL no anarana fohy ny vokatra fenitra ambaratonga. Ny vokatra fari haavon'ny andalana manana PSL1 sodina sy PSL2, ihany koa dia afaka milaza ny hatsaran'ny fari hozaraina ao am PSL1 sy PSL2. PSL2 dia ambony noho ny PSL1, tsy ny fandinihana faneva dia tsy mitovy, simika koa ny fananana, milina fitsipika hery tsy mitovy. Ary raha ny toerana mba ho ny API 5L tsipika sodina, dia tokony ho voalaza tsara ny habeny, naoty ireo famaritana ankapobeny, koa tsy maintsy hanazava ny famokarana faneva Lève, PSL1 na PSL2.
PSL2 kokoa noho PSL1 fotsiny amin'ny fananana simika, tensile hery, tsy manimba fitsapana, sy ny fiantraikany fitsapana.
Tsy mitovy fomba fitsapana fiantraikany ho an'ny PSL1 sy PSL2
API 5L PSL1 vy tsy sodina tsipika takiana hanao fitsapana ny fiantraikany.
Fa API 5L PSL2 vy tsipika sodina, afa-tsy Grade X80, ny hafa rehetra naoty ny API 5L andalana sodina maintsy ny fiantraikan'ny fitsapana amin'ny hafanan'ny ny 0 ℃ . Ny eo ho eo ny lanjan'ny Akv: longitudinal tari-dalana ≥ 41J, tranverse tari-dalana ≥ 27J.
Fa API 5L Grade X80 PSL2 andalana sodina amin'ny 0 ℃ ho an'ny rehetra ny habeny, hizaha toetra ny Akv fiantraikany eo ho eo ny vidiny: longitudinal tari-dalana ≥ 101J, tranverse tari-dalana ≥ 68J.
Hydraulic fitsapana samy hafa ny API 5L andalana fantsona ao PSL1 sy PSL2
Fa API 5L PSL2 tsipika sodina no hanao ny hydraulic fitsapana ho an'ny tokan-tena tsirairay sodina, sy ny API famaritana fenitra tsy hamela ny hanana Non-manimba fitsapana hanoloana ny hydraulic fitsapana, koa izany fahasamihafana lehibe eo amin'ny Shinoa fitsipika sy ny API 5L fitsipika. Fa tsy PSL1 takiana Non-manimba fitsapana, fa PSL2 no hanao ny Non-manimba fitsapana ho an'ny tsirairay sodina tokana.
Tsy mitovy ny zavatra simika API 5L tsipika fantsona ao PSL1 sy PSL2
Zavatra simika sy ny hery ihany koa ny milina hafa eo amin'ny andalana PSL1 API 5L sodina sy ny API 5L PSL2 tsipika sodina. Fa ny tsipiriany toy ny famaritana etsy ambany. API 5L PSL2 manana famerana ny karbaona mitovy afa-po, izay noho ny karbaona-bahoaka ampahany lehibe noho 0,12%, ary mitovy na latsaky ny 0,12%. CEQ hafa dia ampiharina. Fa andalana sodina in PSL2 tensile hery manana fetra ambony indrindra. More Info azafady handinika famaritana API 5L ampahany 9.2 sy 9.3.
6 Floor, Block A, Zhongliang Hebei Plaza. No.345 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei, Shina.
tonga aho amin'ny Skype